उत्साहमा पहिलो वर्ष | Epradesh Today
Homeफिचरउत्साहमा पहिलो वर्ष
संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । २०७४ साल असारमा भएको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर स्थानीय तहमा जिम्मेवारी समालेको एक वर्ष वितेको छ । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको स्थानीय सरकार अहिले पूर्णरुपमा क्रियाशील रहेको छ । धेरै अपेक्षा, योजना र आश्वासन बोकेर आएका जनप्रतिनिधिहहरुको एक वर्ष कसरी वितेको छ ? एक वर्षको अवधिमा अपेक्षा अनुसारको स्थानीय तहमा काम हुन सकेको छ की छैन । कस्ता खालका समस्या, चुनौती, जटिलता, अवसर भूमिका देखिए त्यो विषयमा हामीले जनप्रतिनिधिका एक वर्ष खोतल्ने प्रयास गरेका छौ । प्रदेश टुडेको साप्ताहिक स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा लमही नगरपालिकाका नगर प्र्रमुख कुलबहादुर केसीसँग एक वर्षको अनुभवका बारेमा कुराकानी गरेका छौ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश ।
निर्वाचित भएर जिम्मेवारी समालेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो वर्षमा हामीले जनप्रतिनिधिहरुले उतसाहको बर्षका रुपमा लिन सक्नुपर्छ । हामीले पनि उत्साहको रुपमा लिएका छौँ । उत्साहमा चुनौती र अवसर पनि सँगसँगै देखिएका छन् । विभिन्न चुनौतिसँगै सिकाइको बर्षसमेत पहिलो बर्ष रहेको अनुभव गरेको छु ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामी ठूलो योजनाको साथ ठूलो उत्साहको साथ नगरपालिका प्रवेश गरेका थियौँ । यो नगरपालिकालाई सबै स्थानीय तहहरूभन्दा राम्रो नगरपालिका बनाउँछौ भन्ने उत्साहका साथ नगरपालिकामा प्रवेश गरेका हौँ । र काम गर्ने क्रममा लमही नगरपालिकाभित्र काम गर्ने दौडानमा निर्वाचित भएलगत्तै विपद् आइप¥यो । लमही नगरपालिकामा, यो यद्दपि दाङ जिल्लाभरि रह्यो । तर खास गरिकन लमही नगरपालिकामा यसबाट बढी प्रभावित भयो । र हामी सबै शक्तिहरु त्यो विपद् व्यवस्थापन गर्नका निम्ति बाढीबाट प्रभावित भएका मानिसहरुलाई उद्धार गर्नको निम्ति, उनीहरुलाई धेरैभन्दा धेरै राहत उपलब्ध गराउनका निम्ति र तिनीहरुलाई पुनःस्थापना गर्नमा समय खर्चिनु प¥यो । त्यतिबेला मलाई लाग्छ, हाम्रो नगरसभा भन्दा पहिले त्यो भएको थियो । यद्यपि त्यो नगरसभा भन्दा पछि भएको भए हामीले तिनिहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने थिएनौँ, नगरसभा भन्दा पहिले भएको हुनाले पहिलो नगरसभामार्फत यो नगरका सबै गौरवका योजना, गाउँका दूरदराजमा रहेका मान्छेहरु किसान गरिब सबैलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट बनाइ रहँदा हामी विपद्बाट विस्थापितहरुलाई स्थापित गर्ने खालका बजेट पनि विनियोजन ग¥यो, र हामी एक वर्षको कार्यकाल भरी उन्नाई बीस वर्षको जो ग्याप थियो जनप्रतिनिधिहरुविहीन, गाउँमा विकासको गति असाध्यै न्यून थियो, त्यो गतिलाई अब एउटा गति दिनुपर्छ भन्ने मनसायका साथ हामी गाउँ– गाउँमा बाटाघाटा पुलपुलेसा अन्य सबै चिजहरु निर्माण ग¥यौँ, त्यो हजुरहरुको आँखाको नजरमा रहेको छ । हजुरहरुले पनि देखिरहनुभएको छ, गाउँ–गाउँमा बाटाहरु खुलेका छन् । स्कुलहरु व्यवस्थित भैरहेका छन् । खानेपानीको व्यवस्था भैरहेको छ । बिजुलीबाट बञ्चित जनताहरु बिजुलीको महशुस गरिरहेका छन् । मैले समग्रमा भन्नुपर्दा एक वर्षको कार्यकालमा जति जनताले अपेक्षा गरेका थिए, त्यति नभएको होला तर, गर्नुपथ्र्यो त्यति काम पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ ।
निश्चितरुपमा काम गर्दाखेरी चुनौतीहरु आइलाग्छन् । यो पहिले अनुभव हो, पहिलो चुनौती भन्या यो हिजोसम्मको परिपाटी के थियो भने ? हामीले काम गर्दा नजानेका कुराहरु माथि सोध्ने, माथिबाट के भन्छ, भने, माथिबाट बनार्ईएका ऐन कानूनका मातहतमा रहेर कम गर्ने कुरा थियो । अहिले चाहिँ आफै कानून बनाउने, आफै चल्ने, चुनौती प्रशस्त छन्, हरेक कुरामा चुनौती नै चुनौती छन् । हजुरहरुलाई मैले भन्न चाहन्छु, मेरो एक वर्षको कार्यकाल बित्यो हामी धेरै कुरामा अनविज्ञ छौँ । अझै हामीले कसरी गर्ने के गर्ने कुरामा हामीलाई गाह्रो छ, म अफिसमा बसिरहदा धेरै साथीहरु आउनु हुन्छ, कसैले सहकारी दर्ता गर्ने भन्नुहुन्छ, कसैले समूह दर्ता गर्ने भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ, यसको विधि प्रकृया के हो, हामी अझै अन्यौलमा छौँ ? हामीले अन्त सोध्यौँ खै त हजुर त्यहाँ कसरी हो, के होे सबैमा सबै विज्ञ कोही छैन त्यसकारण यी काम गर्ने कुरामा जनताको आशा फेरी के हुन्छ भने नगर प्रमुख कहाँ जाने हो भने सबै कुराको समाधन निस्कन्छ भन्ने जनताको चाहना हुन्छ, हुन पनि स्वभाविक हो, तर पनि के छ भने पहिलो पटक नगर प्रमुख हुँदा यी सबै चुनौती छन्, म जनताका सामूमा, यसले केही जानेको रहेन छ, र यसले त केहि बुझेको रहेनछ भन्ने सोंच जनताहरु परेको छ । यद्यपि त्यो हटाउनका निम्ति त्यो कुरालाई कम गर्न म स्वयम लागि परेको छु । आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढाइ रहेको छु, तर पनि काम गर्ने कुरामा धेरै चुनौती छन् । अर्को कुरा यो स्थानीय सरकार भएपछि कर उठाउने यो स्थानीय सरकारकै अधिकार भएकोले जो आजसम्म मान्छेहरुले करको त्यति अनुभव थिएन । अहिले देशव्यापी रुपमा करको विरोध भैराखेको छ । कहि नारा जुलुस भैराछन्, कै के भाछन्, म पनि अध्ययन गरिरहेको छु र, हाम्रो लमही नगरपालिकामा जग्गामा लगाईएको कर, मालपोतमा लगाइएको कर असाध्यै महंगो भनेर विरोध आयो, यद्यपि त्यो कर हामीले लगाएका थिएनौँ, हिजो सर्वदलियले लगाएको करलाई हामीले त्यसलाई यथावत निरन्तर दिएका थियौँ । तर पनि यो कर लगाउने कुरा, यसलाई वैज्ञानिक बनाउने कुरा सामान्य कुरा थिएन, चानचुने कुरा थिएन । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने काम हामी हिजोको अनुभवबाट यो साल हामी व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेका छौँ तर, पनि कर लगाउने कुरा सामान्य कुरा थिएन । ऐन कानुन बनाउने कुरा समय सापेक्ष हाम्रो ठाउँ वस्तु भूगोल अनुसारका कानून बनाउने कुराहरु यिनै चुनौतीपूर्ण काम हुन् । तर पनि चुनौतीबाट भागेर होईन, यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्ने हामी प्रयासमा छौँ र बढि रहेका छौँ ।
उपलब्धि नहुने कुरा होइन तर, कर्मतिर चाहिँ निरन्तर लागिरहनु पर्छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने संस्थागत गर्नको निम्ति हाम्रो क्रियाशीलता, हाम्रो ईमान्दारिता नताप्रति आशा भरोसा गाउन सक्ने क्रियाकलाप गर्न सक्यौँ भने निश्चितरुपमा यो लमही नगरपालिकाको भविष्यमा म्रो, सुन्दर बन्न सक्छ । यहाँका जनसमुदायहरुले पनि यसलाई पोजेटिभ ढङ्गले सहयोग गर्नुभयो भने काम गर्ने मान्छेको जोस जाँगर र इमान्दारितामा अझै वृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
अवसरहरु प्रसस्त छन् । म लमही नगरपालिकाको प्रथम नगर प्रमुख हुँ । स्थानीय सरकार गठन भैसकेपछि पहिलो सरकारको सरकार प्रमुख हुँदा यो नगरपालिकाका सबै जगहरु बसाल्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ त्यो मैले अवसरको रुपमा लिएको छु । त्यसकारणले यो नगरको सुन्दर भविष्य निर्माण गर्ने जिम्मेवारी भएको हुनाले यो गर्न पाउने यो मेरो लागि ठूलो अवसर हो । म यो अवसरलाई भरपुर रुपमा उपयोग गर्दै लैजाने छु । यो जग राम्रो भयो भने भोलिका सन्ततीहरुले सम्झिने लायक हुने भएको हुनाले पनि मेरो लागि एकदमै महत्वपूर्ण अवसर हो । म यो अवसरलाई भरपुर ढङ्गले उपयोग गर्दै लमही नगरबासीहरुको पक्षमा, गरिब किसानका पक्षमा दिनदुःखीका पक्षमा यो सरकार अगाडि बढ्ने एउटा गोरेटो तयार गर्ने मैले योजना बनाएको छु ।
सम्भावना असाध्यै राम्रो छ । लमही नगरपालिकाको मध्यविन्दुबाट पूर्व–पश्चिम राजमार्ग गएको छ । त्यही मात्रै होइन, अहिले लमही कोइलावास सडक निर्माण हुँदैछ । लमही नगरपालिका पाँच नम्बर प्रदेशको केन्द्रविन्दुमा अवस्थित छ । त्यसकारणले सबै दृष्टिकोणले पाँच नम्बर प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरु भन्दा, सबै भन्दा सुन्दर र सबैभन्दा सम्भावना भएका क्षेत्रहरु यो लमही नगरपालिकामा छन् । मैले हजुरहरुलाई एउटा कुरा राख्न चाहे । यदि कतै राजधानी सर्छ भने लमही नगरपालिकाभित्र सर्छ । राजधानी बस्नेसम्म अवसर पनि यो लमही नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने सम्भावना छ । त्यति मात्रै नभएर विकासका दृष्टीकोणले, कृषिका दृष्टिकोणले असाधै उर्भरभूमि भएको ठाउँ हो । व्यापारिक दृष्टिकोणले हेर्नुस् पूर्व–पश्चिम राजमार्ग लमही कोइलावास सडकदेखि लिएर यसको मुटुमा रहेको लमही हामीसँग छ ।
त्यसैगरी पर्यटकीय स्थालका रुपमा हेर्नु हुन्छ भने जखेराताल यसै क्षेत्रमा छ । बगार बाबा धार्मिक स्थल पनि यसै क्षेत्रमा पर्दछ । बोटिङ्ग गर्नका निम्ति राप्ती नदी छ । यो लमही नगरपालिकामा हामीसँग प्रसस्त सम्भावनाहरु छन् । यो सम्भावनाहरुलाई भरपुर उपयोग गर्दै यसको उन्नती प्रगतीलाई हामीले हासिल गर्न सक्ने सम्भावनाहरु छन् ।
काम गरिरहदा उपलब्धि प्राप्त नहुने कुरा हुँदैन । धेरै कुराहरु गरेका छौँ । तर हामी सबै कुरामा त्यसको नतिजा नआएको होला तर, लमही नगरपालिकाले अहिले राष्ट्रियरुपमै आफूलाई चिनाउने गरी उपलब्धि प्राप्त भएको फोहर मैलाका सन्दर्भमा सरसफाई गर्ने कुरा छ । सरसफाईका सन्दर्भमा लमही नगरपालिकाले उल्लेनीय प्रगति गरेको छ । लमही नगरपालिकाबाट सिक्नुपर्छ भन्ने खालका सन्देशहरु केन्द्रमासम्म सम्प्रेषण भएका छन् । त्यति मात्रै नभएर हामीले चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने अवसरका रुपमा लिएका छौं । जसरी बाढी आएर यहाँका जनताहरुलाई दुःख दियो, यहाँका जनताले पीडा भोग्नु प¥यो । हामीले पनि धेरै दुःख पायौँ तर, पनि त्यसको नतिजा के आएको भन्ने अहिले पनि नेपालमा बाढी, पहिरो, भूकम्प पीडितहरुले आफूले पुनःस्थापित हुने अपसर प्राप्त गरेका छैनन्, तर लमही नगरपालिका मात्रै त्यस्तो नगरपालिका हो जसले २३ जना घरबारविहीन भएका थिए, ठिक २३ जनामध्ये बाईस जनाको आवासको व्यवस्था गरियो, भवन बनाई दिनेसम्म काम लमही नगरपालिकाले गर्न सकेको छ । यो एउटा उपलब्धिको रुपमा यो सधैंभरि सबैले सिक्ने गरी अनुशरण गर्ने लायक काम भएको छ । मैले चौतर्फी यसको विषयमा बुझ्नुपर्छ जान्नुपर्छ भनेर यसको प्रशंसा भएको छ । अहिले पनि भन्ने गरिन्छ, यो अठार उन्नाई वर्षसम्म नभएको काम एक वर्षमा कसरी होला भन्ने सोचिरहनु भएको होला । अहिले एक वर्षमा धेरै काम भएको छ । त्यो मात्रै होइन राप्ती नदीका विषयमा धेरै कुराहरु आएका छन् । त्यो विषयमा धेरै खालका भ्रष्टाचारहरु भए आदि इत्यादीहरु भए भनेर मान्छेहरुले मिडियाबाजी गरिरहनुभएको छ । तर वास्तविक केहो भने, लमही गरपालिकाको इतिहासमा एउटा सबैभन्दा ठूलो काम राप्ती नदीलाई दोहोरो तटबन्ध गरेर बीचबाट निकाल्ने र, त्यहाँको सयौँ विगाह जग्गा निकासा गर्ने काम हुनथालेको छ । त्यो एउटा सफलता हो । एउटा राम्रो पक्ष हो भन्ने मलाई लाग्छ । हिजोका दिनमा विरोध गर्नेहरु आज आएर यो ठिकै रहेछ, यो विषयलाई बुझ्दै जाँदा यो कुरा ठिकै रहेछ भन्ने महशुस गर्नुभएको छ । त्यस कारणले काम गर्दै जाँदा उपलब्धिहरु प्राप्त हुन्छन् । उपलब्धि नहुने कुरा होइन तर, कर्मतिर चाहिँ निरन्तर लागिरहनु पर्छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने संस्थागत गर्नको निम्ति हाम्रो क्रियाशीलता, हाम्रो ईमान्दारिता जनताप्रति आशा भरोसा जगाउन सक्ने क्रियाकलाप गर्न सक्यौँ भने निश्चितरुपमा यो लमही नगरपालिकाको भविष्यमा राम्रो, सुन्दर बन्न सक्छ । यहाँका जनसमुदायहरुले पनि यसलाई पोजेटिभ ढङ्गले सहयोग गर्नुभयो भने काम गर्ने मान्छेको जोस जाँगर र इमान्दारितामा अझै वृद्धि हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
लमही नगरपालिका पाँच नम्बर प्रदेशको केन्द्रविन्दुमा अवस्थित छ । त्यसकारणले सबै दृष्टिकोणले पाँच नम्बर प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरु भन्दा, सबै भन्दा सुन्दर र सबैभन्दा सम्भावना भएका क्षेत्रहरु यो लमही नगरपालिकामा छन् । यदि कतै राजधानी सर्छ भने लमही नगरपालिकाभित्र सर्छ । राजधानी बस्नेसम्म अवसर पनि यो लमही नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने सम्भावना छ ।
हामी यो नगरको समृद्धि हासिल गर्नको निम्ति, यो नगरलाई एउटा समृद्ध नगरपालिका बनाउनका निम्ति हामी दुई तीन चरणमा योजना बनाएका छौँ । जस्तैः दीर्घकालिन, अल्पकालिन योजना हामीले बनाईरहेका छौँ । अल्पकालिन योजनाहरुमा जनताका न्यूनतम आवश्यकताहरुलाई पूर्ति गर्ने र जो असाध्यै न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरु नपाएका मान्छेहरु त्यो आवश्यकता पूरा गर्नका निम्ति पनि लागिरहेको छौँ, त्यसको दीर्घकालिन रुपले यो लमही नगरपालिकालाई राम्रो बनाउनका निम्ति हामीहरुले धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ । नगरको रिङ रोडलाई पाँच वर्षभित्र हामीहरुले पिच गर्ने भनेर हामीले एउटा महत्वकांक्षी योजना लिएका थियौँ । निश्चितरुपमा यो रिङरोडले सबै नगरपालिकाका गाउँबासीहरुलाई छुने छ । यसको महत्वपूर्ण काम यो नगरलाई सुन्दर बनाउने, यो नगरलाई समृद्ध बनाउने, यो नगरलाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका निम्ति रिङरोडले एउटा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैगरी हामीले जखेराताल र बगार बाबा धार्मिक स्थालको डिपिआर तयार गरेका छौँ, माष्टर प्लान बनाएका छौँ । यो माष्टर प्लान अनुसार बन्यो भने, एउटा नगरपालिकामा अहिले जति इनकम छ, त्यो इनकम भन्दा बढी जखेरा ताल र बगार बाबा धार्मिक स्थलले मात्रै पूरा गर्न सक्छन् । अहिले पछिल्लो समय तेस्रो नगरसभामार्फत हामी अर्जुन खोलामा हाईड्याम निर्माण गरेर त्यसबाट बहुआयामिक उपयोग गर्ने, सिंचाईको व्यवस्था गर्ने त्यसबाट बोटिङहरु गरेर पर्यटकहरु भित्र्याउने जस्ता डिपिआर तयार गर्नको निम्ति निर्णयहरु गरेका छौँ, भ्यू–टावरको कुरा गरेका छौँ, किसानहरुको जीवनस्तरको समृद्ध बनाउनको निम्ति, तिनको पेशालाई म¥र्यादित बनाउनको निम्ति किसानलाई केन्द्रित कार्यक्रमहरु ल्याएका छौँ । यसरी निश्चितरुपमा यो लमही नगरपालिका समृद्ध हुनेछ । भोलि लमहीमा बस्ने सबै नागरिकहरुले लमहीबासीभन्दा पनि गौरवको अनुभव हुनेखालका योजनाहरु हामीले ल्याएका छौँ ।